रंगियो दुर्गाथली- प्रदेश ७ - कान्तिपुर समाचार
बझाङ — वीरसती मेलाको रौनकले गाउघर गुन्जिएको छ । जिल्लाको दक्षिण पश्चिमको छबीस पाथीभेरा र दुर्गाथली गाउँपालिकाको बिसौनामा लाग्ने यो मेला भर्न आउनेको घुइँचोले बाटामा पाइला राख्ने ठाउँ छैन ।
हरेक वर्ष भदौ १९ गतेबाट सुरु भएर ५ दिनसम्म चल्ने यो मेलाले सबैलाई एउटै थलोमा ल्याइदिएको छ ।
स्थानीयले पहिलो दिन मंगलबार भगवान महादेवको प्रिय बाजा डमरु बजाउँदै च्याकोटमा रहेको महालिंग मन्दिरमा पूजा गरेका थिए । दोस्रो दिन थली जिउलाथित दुर्गा भवानीको पूजा गरे । यी दुई दिन व्रत बसेर पूजा गरेमा इच्छित फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । दुर्गा देवीको पूजासँगै महिलाले चाभाई खेले ।
टोली बिसौना चौर पुगेपछि रातभर देउडा, नाचगान र रमाइलो गरेर उत्सव मनाए। त्यसपछि विभिन्न प्रतियोगितात्मक खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रमको धुम मच्चिएको छ । परम्परागत वेशभूषामा सजिएका महिलाहरूले खेलेको चाभाई खेल मेलाको प्रमुख आकर्षण बनेको थियो ।
मेला भर्न विभिन्न ठाउँमा रहेका र विदेश गएका छबीसवासीहरू घर फर्केका छन् । छबीस पाथीभेरा गाउँपालिकाका लागि यो मेला वर्षभरिकै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको स्थानीय धनशेर बुढाले बताए । उनले भने, ‘वीरसती मेला दसैंभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ । यो मेलाको बेला यहाँका प्रायजसो मानिसहरू घर फर्केका छन् ।’
पछिल्लो समय मेला भर्न जिल्लाका अन्य ठाउँबाट समेत मानिसहरू आउने गरेको मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनलाल विकले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:२४
पुराना बैंक सुध्रिने कहिले ?
काठमाडौँ — पुराना सरकारी नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ढिलासुस्ती, झमेला झेल्दै आएका छौं । पहिले संस्थाहरूको बचत खाता खोल्न पाइन्थ्यो । कुनै संस्थाको एउटा खाता बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको हातामा रहेको बैंकमा थियो ।
लेनदेन चलिरहेकै थियो । केही दिनअघि चेक सकिएर नयांँ लिन जांँदा खाता तुरुन्त बन्द गरी चल्ती खोल्नु, आइन्दा बचतबाट कारोबार गर्न पाइन्न भनियो । यो–यो विवरण ल्याउनु र खातामा दस्तखत गर्ने सबैजना उपस्थित हुनु आदि भनियो । सम्बन्धित खाता भएको संस्थाको अनुरोधको एउटा चिर्कटो लिएर टिप्पणी लेखी बचतबाट चल्तीमा खाता रूपान्तरण बैंकबाटै गरिनुपथ्र्याे । हामी भनिएका कागजातसहित एउटा बाक्लो फाइलै खडा गरेर बैंक गयौं । तालुकवाला हाकिमकहांँ फाइल पुग्यो । ‘एकै बैंकभित्र भएकाले चेक काटेर झन्झट नगर्ने, आन्तरिक रकम स्थानान्तरण गर्ने भनेर तल भन्नुस्,’ हाकिमले भने । फाइल पुन: फांँटमा आयो, तब कर्मचारीले ‘हुंँदैन चेक लेख्नुस्’ भने । चेकका सबै पन्ना प्रयोग भइसकेका थिए । ‘यो फारम भर्ने, काउन्टरमा गएर एक पन्ना चेक लिने र भर्ने, त्यो नभई हुंँदैन’ भनेर उनी कडकिए ।
फारम भरेर फांँट हुँदै पुन: हाकिमसम्म पुग्यौं । उनले पुन: ‘यो किन आवश्यक पर्‍यो ?’ भनी सोधे । कारण बतायौं । ‘ल त्यसै गर्नुस् त’ उनले भने । चेकमा फेरि सबैको दस्तखत अनिवार्य चाहिने भयो । यति काम गर्न ३ घण्टा लाग्यो ।
त्यहीं भित्रका ४ वटा इकाइ धाउनुपर्‍यो । के यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न ?
– मुरारिविनोद पोखरेल